Dalxiiska ayaa loo baahan yahay in lagu daro doodaha helitaanka tallaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Dalxiiska ayaa loo baahan yahay in lagu daro doodaha helitaanka tallaalka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Eswatini Breaking News • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wtn
Gudoomiyaha ATB Mr. Cuthbert Ncube oo kahadlay Rajada Mashruuca Gudiga Dalxiiska Afrika
In kasta oo muwaadiniinta ku nool Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ay haystaan ​​tallaal ku filan, Afrika, Kariibiyaanka iyo meelaha kale ee dalxiiska ee waaweyn ayaa ka dambeeya adduunka intiisa kale. Tani waxay joojisaa dhaqaalihii inay shaqeeyaan, gaar ahaan warshadaha safarka iyo dalxiiska.
Cuthbert Ncube, gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa ku dadaalaysay inay sare u qaaddo tallaallada COVID-19 ee Afrika. Waxa uu leeyahay Dalxiiska waa laga tagay doodaha noocaan ah.
Dalxiiska Adduunka Network Guddoomiyaha Juergen Steinmetz ayaa ku boorriyay dalxiiska inay qayb ka noqdaan wada -hadallada. Dalxiisku waa waax dhaqaale oo lama huraan u ah dalal badan mana shaqayn karo haddii aan la tallaalin xirfadlayaasha warshadaha iyo booqdayaasha labadaba.
Madaxda Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF), Bangiga Adduunka, Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), iyo Ururka Ganacsiga Adduunka (WTO) ayaa la kulmay hoggaamiyeyaasha Hay'adda Tallaalka Tallaalka Afrika (AVAT), CDC Afrika, Gavi, iyo UNICEF si degdeg ah u kordhiya tallaalada waddamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa hoose dhexe, gaar ahaan Afrika.
“Wadamadan, oo badankoodu ku yaal Afrika, si fudud uma heli karaan tallaal ku filan si ay u gaaraan xitaa himilooyinka caalamiga ah ee 10 boqolkiiba daboolida dhammaan waddamada bisha Sebtember iyo 40 boqolkiiba dhammaadka 2021, iskaba daa hadafka Midowga Afrika ee ah 70 boqolkiiba 2022 ”, Ayay yiraahdeen saraakiisha Qaramada Midoobay.
Sinnaan la'aanta tallaalka
Dhibaatada sinnaan la'aanta tallaalka ayaa ku wadata “kala-duwanaansho khatar ah” heerarka badbaadada COVID-19 iyo dhaqaalaha adduunka, madaxda hay'addu waxay sheegeen, iyagoo u mahadcelinaya "shaqada muhiimka ah" ee AVAT iyo COVAX ee isku dayaya inay wax ka qabtaan "xaaladda aan la aqbali karin" .
Si kastaba ha ahaatee, waxay ka digeen, “si wax-ku-ool ah wax uga qabashada tallaalkan aadka u yaraaday ee sahayda yaraanta ee waddamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa hooseeya, oo awood buuxda u siinaya AVAT iyo COVAX, waxay u baahan tahay wadashaqeyn degdeg ah oo ay yeeshaan soo-saareyaasha tallaalka, waddamada tallaalka soo saara, iyo waddammada horay u gaaray heerarka tallaalka oo sarreeya ”.
Si loo hubiyo in dhammaan waddammada ay gaaraan himilooyinka caalamiga ah oo ah ugu yaraan 10 % daboolidda Sebtember, iyo 40 boqolkiiba dhammaadka sanadka, Saraakiisha ugu sareysa ee Qaramada Midoobay waxay ugu baaqeen waddamada qandaraasyada badan qaatay inay “isweydaarsadaan jadwalka dhalmada dhow oo leh COVAX iyo AVAT ”.
Waxay kaloo kula taliyeen soo -saareyaasha tallaalka inay “isla markiiba mudnaanta siiyaan oo ay fuliyaan” qandaraasyadooda COVAX iyo AVAT, iyo inay bixiyaan saadaasha sahayda oo joogto ah oo joogto ah.
Intaa waxaa dheer, madaxda hay'adda Qaramada Midoobay waxay ku boorriyeen waddamada warshadaha ku horumaray ee G7 iyo dhammaan waddamada wax-qaybsiga inay "si degdeg ah u fuliyaan ballanqaadyadooda" iyada oo la xoojiyay aragtida dhuumaha, nolosha wax-soo-saarka badeecadda, iyo taageeridda sahayda dheeraadka ah-maaddaama boqolkiiba 10 ka mid ah ku dhawaad ​​900 milyan oo qaddar go'an ay leeyihiin weli la raro.
"Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan waddamada inay tirtiraan xayiraadaha dhoofinta iyo caqabadaha kale ee ganacsi ee ku saabsan tallaallada COVID-19 iyo wax-soo-saarka ku lug leh soo-saarkooda," ayaa lagu yiri bayaanka.
Caafimaadka adduunka ayaa 'halis ku jira'
Dhanka kale, hay'adaha Qaramada Midoobay waxay sii xoojinayaan shaqadooda COVAX iyo AVAT si wax looga qabto bixinta tallaalka joogtada ah, soosaarka, iyo arrimaha ganacsiga, gaar ahaan Afrika.
Waxay abaabulayaan deeqo iyo maalgelin dhimis ah si ay u taageeraan shaqadan.
“Waxaan sidoo kale sahamin doonnaa hababka maaliyadeed si loo daboolo baahiyaha tallaalka ee mustaqbalka sida uu codsaday AVAT…
Madaxda hay'adda Qaramada Midoobay waxay xaqiijiyeen inay sidoo kale sii wadi doonaan kobcinta xogta, aqoonsiga meelaha bannaan iyo hagaajinta hufnaanta sahayda iyo adeegsiga dhammaan aaladaha COVID-19.
“Waqtiga ficilku waa hadda. Koorsada masiibada - iyo caafimaadka adduunka - ayaa halis ku jira ", ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka.
Guddoomiyaha Dalxiiska Afrika Cuthbert Ncube ayaa yiri:
“Dalxiiska Afrika kuma shaqeyn doono qof walba oo jooga ilahayaga iyo suuqyada qaatayaasha ee leh tallaalada. Afrika waxay ku jirtaa khasaare aad u xun. Dhammaan qeybaha ay saameysay, gaar ahaan dalxiiska waa inay ku jiraan hal miiska marka laga hadlayo qorshayaasha qeybinta tallaalka. ”
Juergen Steinmetz, gudoomiyaha Shabakada Dalxiiska Adduunka ku daray:
Waa wax laga naxo in aan la arkin UNWTO oo aan ka mid noqon wadahadalkaan. Waaxdayadu waxay u baahan tahay matalaad degdeg ah dhammaan heerarka. Tallaalku waa saldhigga cusub ee dalxiis kasta oo shaqeynaya. WTN waxay diyaar u tahay inay buuxiso booskan bannaan oo u hadasho kuwa aan samayn ama aan awoodin. ”